Nosy-be : Miakatra ny vidim-piainana, 2 hetsy Ariary ny gonim-bary, voatabia singany iray vidina Ar 1 000
(11-01-2018) - Taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Ava, dia niakatra avokoa ny vidin’ ireo entana ilain’ny mponina amin’ny fiainany andavanandro ao Nosy-be, ka maro ireo sahirana tsy maharaka intsony ny vidim-piainana miakatra be.
Ao bazaribe Hell ville, ohatra, dia vidina 1 000 Ariary ny voatabia singany iray. Anana telo tsongo 500 Ariary. 16 000 Ariary ny kilaon’ny hen’omby. 125 000 Ariary ny gonim-bary 50 kg, raha tafakatra hatramin’ny roa hetsy Ariary izany amin’ireo toerana saro-dàlana. Ifampitadiavana any an-toerana ihany koa ny hazan-dranomasina sy ny atody.
Araka ny tati-baovao voaray, dia efa miverina miasa ny fitaterana an-dranomasina izay mampitohy an’i Nosy-be sy Ankifiny Ambanja, raha nihantona nandritra ny telo andro izany noho ny fisian’ny andro ratsy.